एनभीएको साधारणसभा तथा अधिवेशन सुरु, मन्त्री अर्यालले भनिन्– माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भरता घोषणा गर्दैछौं | Vetkhabar
Home Breaking News एनभीएको साधारणसभा तथा अधिवेशन सुरु, मन्त्री अर्यालले भनिन्– माछा, मासु, अण्डा र...
एनभीएको साधारणसभा तथा अधिवेशन सुरु, मन्त्री अर्यालले भनिन्– माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भरता घोषणा गर्दैछौं
काठमाडौं । नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएशनको साधारणसभा तथा अधिवेशन सुरु भएको छ । ललितपुरको सानेपा स्थित हेरिटेज गार्डेनमा सुरु भएको एसोशिएशनको साधारण सभाको उद्घाटन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले गरेकी छन् ।
कार्यक्रम सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले समय र युग बदलिएसँगै हामीले काम गर्ने तौर तरिका र आनीबानी सबै बदल्नु पर्ने बताइन् ।
नेपालमा छोटो समयमा कृषि तथा पशुपन्छी पालन क्षेत्रमा आकर्षण बढेको बताइन् । भेटेरिनरी शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या बढेकोबाटै नेपालमा यो क्षेत्रमा आर्षक बढेको स्पष्ट हुने उनले बताइन् ।
उनले नेपालमा अण्डा, मासु, माछा र दूधमा आत्मनिर्भ भएको घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको रहेको बताइन् । यसका लागि परम्परागत रुपमा हुँदै आएको नेपालको पशुपन्छी पालनलाई सुधार गरी व्यवसायिक नबनाइ नहुने अवस्था आएको बताइन् । ‘अब परम्परागत रुपमा एक दुई ओटा होइन,’ उनले भनिन्, ‘सयौं हजारौं संख्यामा पशुपन्छी तथा माछा पाल्नु पर्ने अवस्था आइसकेको छ ।’ नेपालको १५ औं योजनामार्फत कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको सुधारको संकल्प गरेको तथा सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य पूरा गर्न सबै लागि पर्नुपर्ने बताइन् ।
पशुपन्छी पालन कार्यमै काम गर्न विदेश गएका हजारौं नेपाली युवाले अब त्यो ज्ञान र सीप नेपालमै प्रयोग गर्नु पर्ने बताइन् । ‘गरिब र दुःखी मान्छेले मात्रै श्रम गर्ने, पशुपन्छी पालन गर्ने भन्ने सोच हिजोको समाजमा थियो,’ उनले भनिन्, ‘हिजो नेपालमा कृषि तथा पशुपन्छी पालनका काम गर्दा सम्मान नपाएर विदेश गएका युवालाई अब नेपालमै सम्मानका साथ कृषि र पशुपन्छी पालनमा लाग्न सरकारले सघाउने छ । समाज पनि हिजोको अवस्थाबाट परिवर्तन भइसकेको छ ।’ उनले नेपालकै कृषि तथा पशुपन्छी पालनमा लागे देश समृद्ध हुने पनि बताइन् ।
‘हिजो हाम्रो गाउँमा ठूलो जमिन थियो, बाख्रा पालन थालियो,’ उनले भनिन्, ‘राजनीतिमा लागेकोले मैले छोड्न बाध्य भएँ । तर, अन्य सबैले छोड्नु भयो । सोचे जस्तो नाफा नहुने र हैरानी भएर छोडेँ भनेर भन्नु हुन्थ्यो । एक्लै भएकोले कृषि तथा पशुपन्छी पालन निराश भएर छोडेको पाइयो । अब आकर्षण बढाउनु पर्ने छ ।’
कुल गाहस्थ्र्य उत्पादनमा पशुपन्छी पालनको योगदान १३.४ प्रतिशत छ । कुल कृषिको योगदान २७ प्रतिशत छ । कृषि हाबी भएको र पशुपन्छी पालन क्षेत्र कमजोर बनाउने नीति पहिले रहेको तर अब समान र समानान्तर ढंगले पशुपन्छी पालन क्ष्ोत्रमा पनि यस पटक सरकारले सकारात्मक काम गर्ने तथा बजेटको व्यवस्था गर्ने उनले बताइन् ।
‘तपाईंहरुले भन्नु भएको विषयमा हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘कृषि र पशुपन्छीलाई हामी अब कृषि जत्तिकै महत्व दिने छौं । मानव स्वास्थ्य जत्तिकै महत्वका साथ पशु स्वास्थ्यलाई पनि अघि बढाउने छौं ।’
दूध नीति मन्त्रिपरिषद्मा गइसकेको, बर्ड फ्लु नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चालिसकेको, बर्डफ्लु रोग नियन्त्रण निमामावली मन्त्रिपरिषद् लैजाने तयारीमा रहेको तथा एनभीएले दिएको ज्ञापन पत्रका आधारमा सरकारले एक्सन लिइरहेको पनि उनले बताइन् । पशु चिकित्सा सेवा चौबीसै घण्टा सञ्चालन अब सुरु गरिहाल्न उनले निर्देशन दिइन् । त्यस्तै, पशु बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन पनि उनले निर्देशन दिइन् । एशोसिएशनको निर्वाचनले कुशल नेतृत्व छान्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरेकी छन् ।
कार्यक्रममा एनभीएको स्थापना, हालसम्मको यात्रा र वर्तमान अवस्थाबारे अध्यक्ष डा. शीतलकाजी श्रेष्ठले प्रकाश पारेका थिए । कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिवद्वय योगेन्द्र कुमार कार्की र पेम नारायण कँडेललगायतको उपस्थिति थियो । ५२ वर्षअघि एशोसिएशनको स्थापना भएको थियो ।
Previous articleएनभिए अध्यक्षमा शर्मा र श्रेष्ठको प्रतिष्पर्धा :महासचिव, सचिव र कोषध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित
Next articleएनभीएमा डा. शीतलकाजी श्रेष्ठको ह्याट्रिक, डा. वंशी शर्मालाई पराजित गर्दै भारी मतान्तरले विजयी
किबी खेतीमा आकर्षित हुँदै किसान
टुहुरो अर्ना अस्पतालमा
पशुपन्छी औषधि तथा दाना उत्पादन उद्याेगले पनि विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुट...